Warbixinta Norton: Fadeexadaha taageerada tiknoolajiyadu waa hanjabaadda lambar 1
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Warbixinta Norton: Fadeexadaha taageerada tiknoolajiyadu waa hanjabaadda lambar 1
Kooxda cilmibaarista caalamiga ah ee NortonLifeLock, Norton Labs, ayaa maanta daabacday Warbixinteeda Pulse Safety Pulse Consumer Cyber ​​ee sedexdii biloodba mar, iyada oo si faahfaahsan u soo bandhigaysa aragtida ugu sareysa ee macaamiisha iyo waxyaabaha la qaadan karo laga bilaabo Julaay ilaa Sebtember 2021. Natiijooyinkii ugu dambeeyay waxay muujinayaan khiyaanooyin taageero farsamo, kuwaas oo inta badan u yimaada digniin soo-bax ah si qumman loo qariyay iyadoo la adeegsanayo magacyada iyo summadaha shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda, ayaa noqday hanjabaadda ugu sarraysa ee macaamiisha. Fadeexadaha taageerada farsamada ayaa la filayaa inay sii kordhaan xilliga fasaxa ee soo socda, iyo sidoo kale dukaamaysiga iyo weerarada phishing ee la xiriira samafalka.
Norton wuxuu xannibay in ka badan 12.3 milyan oo taageerayaal teknolojiyad ah, kuwaas oo kaalinta koowaad ka galay hanjabaadaha phishing muddo 13 toddobaad oo xiriir ah intii u dhexeysay Luulyo iyo Sebtembar. Wax -ku -oolka khiyaanada noocan ah ayaa kor u kacday intii ay socotey masiibada sababtuna tahay macaamiisha oo aad ugu tiirsan qalabkooda si ay u maareeyaan jadwalka shaqada isku -dhafan iyo hawlaha qoyska.
“Fadeexadaha taageerada farsamada ayaa wax ku ool ah maxaa yeelay waxay ugaarsadaan cabsida macaamiisha, hubin la’aanta iyo shakiga si ay u khiyaaneeyaan dadka qaata si ay u aaminaan inay la kulmaan khatar xagga amniga internetka ah,” ayuu yiri Darren Shou, madaxa farsamada, NortonLifeLock. “Wacyi -gelintu waa difaaca ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo weerarradan lala beegsaday. Marna ha wicin lambar ku qoran soo-kabashada taageerada tiknoolajiyadda, taa beddelkeedna si toos ah ula xiriir shirkadda iyada oo u sii marinaysa mareegtooda rasmiga ah si ay u ansixiyaan xaaladda iyo tallaabooyinka xiga. ”
Norton wuxuu si guul leh u xannibay ku dhawaad ​​860 milyan oo hanjabaado Badbaado Cyber ​​ah rubucii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan 41 milyan oo faylal ku saleysan faylal, 309,666 faylal-guur-guur, ku dhawaad ​​15 milyan oo isku day phishing ah iyo 52,213 ogaanshaha furashada.
Natiijooyinka dheeraadka ah ee ka soo baxay Warbixinta Pulse Safety Pulse ee Macaamilka waxaa ka mid ah:
Badeecadaha ciyaaraha dalwaddu waxay leeyihiin qiime dhab ah: Waxyaabo dhif iyo naadir ah ayaa si aad ah loo raadiyaa waxaana lagu kala iibsan karaa suuqyada dhabta ah. Tusaale ahaan, ciyaar-doorka-doorka badan ee onlaynka ah wuxuu soo bandhigayaa buluug buluug ah oo ah “Koofiyadda Xisbiga,” oo ugu dambayntii lagu qiimeeyay qiyaastii $ 6,700. Norton Labs waxay qabatay olole phishing cusub oo si gaar ah loogu talagalay in lagu helo aqoonsiga galitaanka ee ciyaartoyga iyo macluumaadka xaqiijinta laba-arrimood iyada oo ujeedadu tahay in la xado oo la iibiyo alaabta noocaas ah ee qiimaha badan leh.
Bogagga bangiyada internetka ee khiyaanada leh waa kuwo lagu qanci karo: Baarayaasha Norton Labs waxay aqoonsadeen olole phishing code ah oo lagu beegsanayo macaamiisha bangiga oo leh nuqul kaarboon u dhow oo ah bogga bangiga dhabta ah si loogu khiyaaneeyo gelitaanka aqoonsigooda.
Kaararka hadiyadda ee la xaday ayaa (ku dhawaad) u fiican sida lacag caddaan ah: Gaar ahaan markay fasaxyadu dhow yihiin, macaamiisha waa inay ogaadaan in kaararka hadiyaddu ay yihiin bartilmaameedka ugu weyn ee kuwa wax weerara maxaa yeelay waxay caadiyan leeyihiin ammaan ka hooseeya kaararka deynta oo kuma xirna qof gaar ah magaciisa. Dheeraad ah, kaarar hadiyado badan ah waxaa sameeya isla shirkad leh lambar 19-lambar ah iyo 4-lambar PIN ah. Weeraryahannadu waxay adeegsadaan shabakado loogu talagalay inay hubiyaan dheelitirka kaarka hadiyadda si ay u ogaadaan lambarka kaarka oo sax ah iyo isku -darka pin, iyagoo si buuxda u siinaya lacagaha.
Hackers waxay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan Kaniisadda Kaatooligga Roomaanka iyo Vatican -ka: Baadhitaanka cusub ee Norton Labs ayaa muujinaya haakaris, oo laga yaabo inay ka hawlgalaan Shiinaha, waxay bartilmaameedsanayeen Kaniisadda Kaatooligga Romaniga iyo Vatican -ka. Hal kiis, cilmi baarayaashu waxay ka heleen faylal la bartilmaameedsaday faylal u muuqda inay yihiin dukumiintiyo la xiriira Vatican oo sharci ah laakiin ku faafaya aaladaha adeegsadayaasha gala dukumiintiyada. Mar labaad, kombiyuutarro ku yaal Vatican -ka ayaa la ogaaday inay ku rakiban yihiin furin. In kasta oo weerarada noocan ah ee lala beegsado ay badanaa la xiriiraan ururo waaweyn, dadka ka tirsan kooxaha danta gaarka ah leh, kuwa diidan ama shaqsiyaadka leh shaqooyinka saamaynta leh ayaa sidoo kale laga yaabaa inay la kulmaan weeraro la mid ah, macaamiisha guudna waa inay ka feejignaadaan ololaha phishing -ka iyo bogagga bogagga ee cudurka qaba.